Etu esi eji nchịkọta Google emeziwanye Mgbalị ahịa Gị | Martech Zone
Sunday, May 31, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Oge ụfọdụ a na m eche na ha kwesiri ịgbanwe aha nke nchịkọta na ajụjụ n'ihi na nchịkọta adịghị ka ọ ga - enye nyocha ị na - achọ… ọ na - ewekarị ajụjụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị ghọtaghị data dị n'azụ nzacha, ngalaba na eserese - ị nwere ike ịme echiche ụfọdụ dị egwu dabere na otu ị si ewepụta akụkọ ụfọdụ.
Ileba anya na, ndị folks na Ngwa ngwa nye akuko onu ojoo a:
80% nke ndị na-ere ahịa na-eji nchịkọta Google n'ụzọ na-ezighi ezi.
Neil Patel, Ngwa ngwa
Ihe omuma ahu na-ejeghari ndi oru site na otu esi melite usoro site na nyochaa akuko kwesiri, tinyere:
Mee ka okporo ụzọ na-abawanye site na iji SEO ajụjụ na ọdịda peeji nke akụkọ.
Mee ka okporo ụzọ na-abawanye site na iji okporo ụzọ isi mmalite isiokwu.
Wepụta oge karịa ka ị lekwasịrị anya n'ịkwọ ụgbọ ala ọzọ okporo ụzọ isi mmalite ndị na-ezo aka.
Mepụta ọdịnaya ndị ọzọ na-emetụta ndị na-ege gị ntị site na iji nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ.
Wepu ọkpọ site na ọrụ eruba akụkọ.
Ebuli maka mobile site akụkọ mkpanaka.
Iji akụkọ omenala maka nghọta pụrụ iche.
Hazie ọdịnaya na onyinye na-eji akụkọ ndị na-ege ntị.
Tags: akụkọ ndị na-ege ntịnchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọakụkọ omenalaGoogle Analyticspeeji nke nchịkọta googleGoogle nchịkọtaotúotu esi eji nyocha googleakụkọ mkpanakaquicksproutokporo ụzọ isi mmalite isiokwu akụkọokporo ụzọ isi mmalite ndị na-ezo akaọrụ eruba akụkọ